Ciidanka Sierra-Leone ee Kismaayo jooga Oo maanta Qarax lala eegtay iyo howgalo amni oo bilowday – Radio Daljir
Ciidanka Sierra-Leone ee Kismaayo jooga Oo maanta Qarax lala eegtay iyo howgalo amni oo bilowday
Luulyo 20, 2013 5:45 b 0
Kismaayo, July 20- 2013 – Goor barqanimadii maanta ah waxaa magaalada Kismaayo Qarax miino lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Sierra-Leone ee howgalka AMISOM ka tirsan, wararka aan helayno waxay sheegayaan qaraxa kadib uu halkaasi ka bilowday howgal balaaran.
Qaraxa miino ee lala eegtay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Sierra-Leone ee Kismaayo jooga ayaa waxaa uu ka dhacay meel ku dhow cisbitalka guud ee Kismaayo, sidaasi waxaa Radio Daljir u xaqiijiyey weriye Jaamac Joofane oo jooga Kismaayo.
Waxaa dhintay hal ruux oo rayid ah sidoo kale labba ka mid ah shacabka ayaa dhaawac soo gaaray, kadib markii ay rasaas fureen ciidanka AMISOM ee qaraxa lala eegtay, ma jiro war xaqiijinaya in uu jiro khasaare soo gaaray AMISOM.
Howgalka AMISOM ee weerarka lala eegtay iyo ciidamo kale oo ka tirsan Jubbaland oo Kismaayo jooga, ayaa goobta ka bilaabay howgal rasmi ah oo lagu baarayey weerarka, waxaa la soo sheegaya in dad la qab qabtay basle ma jirto tiro rasmi ah oo saxaafadu ka war heshay.
Kismaayo waxaa ka dhacay toddobaadyadii tegey weeraro lala eegtay ciidamada AMISOM, Arbacadii ina dhaaftay ayaa ahayd markii ugu dambeysay oo qarax noocaasi oo kale ah xaafada Dalcada ee Kismaayo loogu geystay ciidanka Sierra Leone.
Baarlamanka Oo meel-mariyey maamuska Madaxda sare ee Puntland markay xilka degaan (Dhegeyso)